गेस्ट हाउस "आशा", Lazarevskoye: समीक्षा र ठेगाना
आज हामी रिसोर्टमा Lazarevskoye जिल्ला, एक घाम सोची, छुट्टी मा रहेको छ मानिस लागि प्रमोदवनमा स्थित छ जो बारेमा बताउन चाहन्छु। उहाँले शान्ति र काला सागर गर्न निकटता लागि पर्यटक धेरै रुचाउनु भएको थियो। जिल्ला नदी Psezuapse सँगसँगै फैलिएको। मी मात्र 42 सोची र 135 मी देखि तुरुन्तै अलग - क्रास्नोडार को शहर। तर, हाम्रो ध्यान आज पनि गाउँमा छैन नै, र "आशा" अतिथि हाउस (Lazarevskoye) छ। यो उहाँलाई छ, र हाम्रो लेख समर्पित हुनेछ।
यो Lazarev एक आरामदायक कुनामा स्थित छ। त्यहाँ एउटा ठूलो पानी पार्क छ बस 500 मिटर टाढा, र दुई किलोमिटर - यहाँ समुद्र तट नजिक सबै छन्। गेस्ट हाउस "आशा" (Lazarevskoye) जो एक अद्भुत दृश्य प्रस्ताव आरामदायक डबल र ट्रिपल कोठा, प्रदान गर्दछ। पर्यटकहरु खानपान को अनुमति साथ सँगै जान्छ। यो उद्देश्य, एक रेस्टुरेन्ट र एक सानो क्याफे लागि।
,6/ 10a सोची राजमार्ग: अतिथि घर "आशा" (Lazarevskoye) मा स्थित छ। 14:00 मा सुरु मा जाँच गर्नुहोस्। तपाईंले पहिले बसोबास गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि यसलाई अग्रिम प्रबन्ध गर्नुपर्छ। यो अतिरिक्त शुल्क लाग्न सक्छ। तपाईं 12:00 सम्म कोठा छोड्न आवश्यक छ। analogy द्वारा, एक शुल्क लागि, तपाईं केही घण्टा रहन सक्छ।
पनि आगमन अघि, तपाईं बुकिंग रकम को 30% को एक अग्रिम भुक्तानी गर्न आवश्यक छ। बुकिंग प्रक्रिया चलिरहेको बेला तपाईं प्रशासक द्वारा सम्पर्क गरिनेछ र तपाईं भन्नेछु कसरी भुक्तानी गर्न। "आशा" अतिथि हाउस (Lazarevskoye) धेरै सुविधाजनक छ। को रेलवे स्टेशन दूरी - मात्र आधा टाढा किलोमिटर र विमानस्थल - 90 कि। तसर्थ, ट्याक्सी, तपाईंले चाँडै त्यहाँ र फिर्ता केही घण्टामा प्राप्त गर्न सक्छन्।
हिउँ-सेतो तीन मंजिल्ला भवन उपलब्ध कोठा को एक भ्रमण गर्न पर्यटकहरु आमन्त्रित गरिरहेको छ। तिनीहरूले प्रत्येक अन्य देखि अलि फरक छन्, त्यसैले हामी तिनीहरूलाई प्रत्येक विवरण सानो ध्यान। गेस्ट हाउस "Villa आशा" (Lazarevskoye) - एउटा सानो, तर काला सागर तट मा धेरै पर्यटकहरु होटल द्वारा प्रेम गर्नुभयो।
डबल मानक - यो जोडे लागि बारम्बार विकल्प छ। छैन पनि ठूलो, तर आरामदायक, यो एक वास्तविक घर हुनेछ। कोठा सबै आवश्यक फर्नीचर, सहज र आधुनिक छ। त्यहाँ सबै आवश्यक सामान, साथै एक सुन्दर बालकनी संग एक बाथरूम छ। प्रति दिन 1200 rubles - कोठा भाडा को लागत।
यदि तपाईं - को हुर्किसकेका छोराछोरी, यो राम्रो अपार्टमेन्ट चयन गर्न एक सानो बढि छ। कोठा सुविधाहरू बारम्बार, त्यसैले हामी फेरि सूची छैन, तर एक ओछ्यानमा थपियो। त्यहाँ तीन कोठा र जहाँ sloping छत एक विशेष वातावरण सिर्जना गर्ने अटारी, छन्। यी कोठा को लागत - प्रति रात कोठा 1700।
भ्रमण सबै उमेरका छोराछोरीलाई लिन दिनुभयो। अतिरिक्त बिस्तर मा 12 वर्षको मुनिका बच्चाहरु राख्दा प्रति रात 400 rubles दिन्छिन्। पुरानो बच्चा वा वयस्क, पनि, प्रति दिन 450 rubles को लागि एक अतिरिक्त बिस्तर लाग्न सक्छ। तर, सीमा छ: एक भन्दा बढी अतिरिक्त सीट, तपाईं माग गर्न सक्दैन। पाल्तु जनावर र, घर मा आफ्नो पाल्तु जनावर छोड्न अनुमति छैन।
यो तपाईं पहिले गेस्ट हाउस "आशा" (Lazarevskoye) मा जानुहोस् भनेर मान्छु गर्न तार्किक छ। समीक्षा तपाईं पूर्ण प्रभाव बनाउन र तपाईं उपयुक्त अवस्था हो कि निर्णय गर्न मद्दत गर्नेछ। तिनीहरूलाई अध्ययन पछि, हामी यहाँ तपाईँले कुनै पनि शङ्का बिना जान सक्नुहुन्छ निष्कर्ष आए। कोठा क्षेत्र फूल र greenery वरिपरि सबै sanitized छ, धेरै सफा, शान्त सांझ छन्। चोकमा त्यहाँ एउटा सानो पोखरी छ।
कोठा - राम्रो शवर र शौचालय, तातो र चिसो पानी संग कुनै गल्तीलाई। वातानुकूलन यो असह्य गर्मी देखि बचाउँछ, ठीक काम गर्दछ। कोठा मा एक सानो फ्रिज तपाईं हात मा पेय को एक शेयर राख्न अनुमति दिन्छ र एक विशाल बालकनी साँझ चिया पिउन आदर्श ठाँउ हो। होटल को मालिक - एक धेरै राम्रो महिला सधैं आफ्ना पाहुनाहरूलाई भेट्न जान्छ जो।
सानो बेफाइदा छलफल हुनुपर्छ भनेर पनि छन्। पार्किङ कुनै कार केवल एक को क्षेत्रमा स्थित गरिनेछ। तपाईं समुद्र तट आफ्नो ट्रेक लागि, छोराछोरी र वृद्ध गएर र फिर्ता गर्दै हुनुहुन्छ भने गाह्रो हुन सक्छ घर नै, एक पहाडी मा स्थित छ।
सिपल color सडक मा आराम
को Lazarev मा बाँकी जारी, हामी त्यहाँ पनि एक लोकप्रिय पर्यटक गन्तव्य हो जो एउटै नाम, अर्को होटल छ कि फेला परेन। हामी यसको बारेमा अतिथि बताउन निर्णय र तपाईं Lazarevskoye भ्रमण गर्ने निर्णय भने छनौट गर्न प्रशस्त थियो किन कि छ। फिरोजा, 4, गेस्ट हाउस "आशा", उसलाई थप छलफल गरिनेछ बारेमा छ। यो एक विशेष र धेरै सानो होटल, जहाँ कोठा लागि तयार मानक र अर्थव्यवस्था वर्ग हो।
पहिलो नजर मा, यो गेस्ट हाउस एकदम भद्र छ, तर कोठा तपाईं आराम चिटिक्क र भद्र मर्मत गर्न आवश्यक सबै, तर उच्च-गुणवत्ता फर्नीचर छ। त्यसैले तपाईं आफ्नो टाउको र सफा ओछ्यानमा भन्दा छत रुचि हो भने, (Str। सिपल color, 4) Lazarevskoye गर्न त स्वागत गर्दछौं। गेस्ट हाउस "आशा" सबै सुविधाहरु संग कोठा प्रदान गर्दछ। त्यहाँ एक फ्रिज र एक टिभी, वातानुकूलन र बाथरूम स्नान संग छ। एक प्रशंसक संग अर्थव्यवस्था वर्ग कोठा मा, गर्मी देखि तपाईं सुरक्षित गर्न। चोकमा त्यहाँ एक विशाल भान्सा छ। तपाईं घर पकाउने एक प्रशंसक हुनुहुन्छ भने, त्यसपछि तपाईं यसलाई रुचि हुनेछ। र, तपाईं जो धेरै यहाँ क्याफे, मा खाजा जाने सक्नुहुन्छ भने।
बिदा को लागत
प्रति व्यक्ति भुक्तानी गर्न 400 rubles एक दिन हुनेछ। दुई कोठा प्रति दिन 800 rubles को लागि मई मा भाडामा सकिन्छ, मूल्य जुन 1000. जुलाई-अगस्ट मा उठ्नेछ - मौसम को शिखर, यो समयमा एक दिन 1800-2000 rubles भुक्तानी गर्न हुनेछ। सेप्टेम्बर मा, मूल्य ड्रप सुरु, र मखमल सिजन प्रति रात कोठा 1300 rubles सम्म राम्रो छुट तपाईं छनोट हुनेछ। मई मा तीन कोठा सुइट 1000 तिर्न हुनेछ लागि, र जुलाई र अगस्ट मा, मूल्य लगभग 2500. 200 rubles गर्न उठ्नेछ अधिक महंगा चार bedded कोठा खर्च हुनेछ।
पर्यटकहरु सोची एक धेरै राम्रो मूल्यहरु छ भन्छन्। आराम सुविधाहरु उत्कृष्ट हो: सफाई, केन्द्र quietness र निकटता। समुद्र, बस 70 मिटर टाढा समुद्र तट र विचरण। पनि चरम गर्मी फिर्ता जानुहोस् र एक स्नान लिन कठिन हुने छैन। को minuses को साइट मा खाना र कार पार्किंग को कमी उल्लेख गर्न सकिन्छ, तर यी minuses एकदम सम्भव, मिलाप गर्न दिइएको कम लागत अनुमति को।
सपना बीच Resort Sharm5* होटल: समीक्षा, वर्णन, विनिर्देशों र समीक्षा
छात्रहरुको होटल गुलाब Residence बीच (5 *) - सम्पूर्ण परिवारको लागि एक परी कथा!
होटल जटिल मा आराम "आकाशगङ्गा", नोवोसिबिर्स्क
गुफाहरु बीच Resort5* (Hurghada): समीक्षा, वर्णन र फोटो
प्यतिगोर्स्क मा सस्ता होटल: तस्बिर र समीक्षा
रोम मा होटल: लक्जरी, आराम र शिष्टाचार
राजकुमार Yaroslav Vsevolodovich, बुबा Aleksandra Nevskogo। Yaroslav Vsevolodovich को शासनकालमा
कसले domovenka Kuzyu आविष्कार वा "वंशानुगत" घरमा को पहिलो कार्टून कसरी खिच्नुभयो?
एक डिस्क विन्डोज 8 कसरी विभाजन गर्न तीन तरिका हार्ड डिस्क विभाजन विन्डोज 8 (निर्देशन)
जहाँ तपाईं भनिन्छ - तपाईं कसरी थाहा छ? सबै विधिहरू
भान्सा र बैठक कोठा Zoning: रचनात्मक विचार र फोटो
चेरी डाह: विविधता को विवरण, फोटो, समीक्षा र खेती को सुविधाहरू
भारतीय महासागर को समुद्र: रमाइला तथ्य
तपाईं के गर्न केही हुँदा के गर्न